ပေးပို့ | Geocon
next ကိုစီမံကိန်း: Tryst
တစ်ခုကအိုအေစစ်။ ယင်းအာရုံကိုပြေလည်စေလတ်ဆတ်တဲ့လေထု၏တစ်ဦးကအသက်ရှူ။ ကြုံတွေ့ပြီးတာနဲ့, သင်စရာမလိုဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ အဆိုပါ pulsing အတွင်းစိတ်-မြို့ကနေသင့်ရဲ့ထွက်ပေါက်။
အဘယ်သူ၏နေအိမ်တစ်သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဖျော်ဖြေဖို့နေရာနှစ်ခုလုံးကိုသူတို့အဘို့။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ရွေးချယ်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အဆိုပါအကောင်းအဆိုး cons ချိန်ရန်။ စီးတီးသို့မဟုတ်ဆင်ခြေဖုံး? စတိုင်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ? သမိုင်းဝင်သို့မဟုတ်ခေတ်သစ်? ငြူစူခြင်းမကြုံစဖူး option ကိုပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အနည်ထိုင်ဖို့မရှေးခယျြ။ ပိုမျှော်လင့်ထားသူမြားကိုဖွင့်ဘို့, အဲဒီအများဆုံးဆက်ဆက်ကရပါလိမ့်မယ်။
ပုဂ္ဂလိက spa နှင့်အပန်းဖြေအခန်းတစ်ခန်းအားဖြင့်သရဖူဆောင်း 1,2ရက်နှင့်3အိပ်ခန်းတိုက်ခန်းများ။ သငျသညျမြျှောလငျ့ထားမယ်လို့သကဲ့သို့, သာယာအဆင်ပြေမှုများကျန်ကြွင်းကြည့်ရှုမယ့် shared စားဖိုမှူးရဲ့မီးဖိုချောင်နှင့်ခေါင်မိုးပေါ်တို့ပါဝင်သည်, ကင်ဘာရာရဲ့အတွင်းစိတ်-မွို့၌တုနှိုနှင့်မကြုံစဖူးဖြစ်ကြသည်။ အမြင်အရှိဆုံးထူးခြားတဲ့နှင့်အတူအကြွင်းမဲ့အာဏာနှစ်သိမ့်။ အထင်ကရ, သမိုင်းဆိုင်ရာ site ၏အပြင်းထန်ဆုံးထောင့်ကျင်းပခြင်း, ငြူစူခြင်းတည်နေရာကိုထိုက်တန်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။
အဆိုပါပန်းပုမူဘောင်ကနေ On-site ကို concierge ရန်, ငြူစူခြင်းခေတ်မီအသက်အရွယ်အဘို့ဂန္အလှတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံး, နားလည်မှုတစ်ခုသိမ်မွေ့ညိတ်ပါပဲ။ ကျန်းမာသောအခိုက်အလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနှင့်သင်လာကြပြီရုံဘယ်လောက်ဝေးတန်ဖိုးထားခေါ်ဆောင်သွား။
Bunda နှင့် Akuna လမ်း, ကင်ဘာရာမြို့ထောင့်